Ahoana ny fandefasana
Ahoana ny fampiasana fanitarana
Hametraka Chrome extension
➥ Mandehana any amin'ny URL ⤓ Download
Ity URL ity dia azo antoka!
Jereo ny URL hafa
Malware sy phishing checker.
Ity fitaovana fiarovana ity nohavaozina mba hamantarana ireo tranonkala tsy voaaro manerana ny tranonkala ary mampahafantatra ireo mpiserasera amin'ny loza mety hitranga. Manantena izahay fa handrisika ny fandrosoana mankany amin'ny tranonkala azo antoka sy azo antoka kokoa.
Nanazava ny malware
Ireo tranonkala ireo dia ahitana code izay manamboatra rindrambaiko maloto amin'ny solosainan'ny mpitsidika, na rehefa mieritreritra ny mpisera iray fa maka rindrambaiko maimaim-poana izy ireo na tsy mahalala ny mpampiasa. Ny hackers dia afaka mampiasa io rindrambaiko io mba hisamborana sy handefa ireo mpampiasa tsy miankina na tsia. Ny teknolojia azo antoka an-tsarintsika ihany koa dia mijery sy manadihady ny tranonkala mba hamantarana ireo tranonkala mety ho marim-pototra.
Ireo tranonkala ireo dia mihevitra ny ho ara-drariny mba hahafahan'izy ireo mamitaka ny mpiserasera amin'ny fisoratana anarana amin'ny anaran'ny mpampiasa azy sy ny tenimiafina na fizarana vaovao hafa manokana. Ny tranokalan'ny tranonkala izay manonona tranonkala banky ara-dalàna na tranombarotra an-tserasera dia ohatra iraisan'ny tranonkala phishing.
Ahoana no ahafantarantsika ny malware
Ny malware dia mamaritra rindranasan'ny rindranasa maloto natao hampisy ratra. Ireo tranonkala hafahafa dia mametraka malware amin'ny milina mpampiasa iray mba hangalatra fampahalalana tsy miankina na hifehy ny milina mpampiasa ary hanafika ordinatera hafa. Indraindray ny mpampiasa dia mandefa ity malware ity satria mieritreritra izy ireo fa mametraka rindrambaiko azo antoka ary tsy mahafantatra ny fihetsika ratsy. Indraindray, alefa ny malware amin'ny alàlan'ny fahalalany. Ny karazana malware dia ahitana ransomware, spyware, viriosy, kankana, ary soavaly Trojan.
Ny aretina dia afaka miafina any amin'ny toerana maro, ary mety ho sarotra ho an'ny manam-pahaizana koa ny mamantatra raha voan'ny aretina ny tranonkala. Raha te hahita tranonkala maromaro, dia mijery ny tranonkala izahay ary mampiasa milina virtoaly mba handinihana ireo tranokalanay izay nahitantsika ireo mari-pamantarana izay milaza fa nisy tranonkala iray nosakanana.
Ireo no tranonkala izay nokarohin'ireo hackers mba hampiantrano sy hizara rindrambaiko maloto. Ireo tranonkala mivantana dia manararaotra ny navigateur na misy rindrambaiko mahatsiravina izay matetika mampiseho fihetsika maloto. Ny teknôlôjia dia afaka mamantatra ireo fitondrantena ireo mba hizaràna ireo tranokalam-piaramanidina ireo ho toerana fanelezana.
Toeram-pananana azo avela
Ireo tranonkala ara-dalàna dia nokendaina mba hampidirana ny votoatiny, na hampita ny mpampiasa azy, ireo tranonkala mety hanararaotra ny navigateur. Ohatra, ny pejin-tranonkala iray dia mety hampiharina amin'ny code iray izay mamindra ny mpampiasa amin'ny toerana fanafihana.
About TOS politika Fiarovana fiainan'olona Mifandraisa aminay Sitemap Facebook